डा बाबुराम भट्टराईलाई प*क्राउ गर्न माग - Sidha News
डा बाबुराम भट्टराईलाई प*क्राउ गर्न माग
काठमाडौं । पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पछिल्ला दिनहरुमा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका बयान दिदै आएको आ*रोप लाग्ने गरेको छ । केही हप्ता पहिले टीकापुरमा पुगेर सामाजिक सद्भाव भ*ड्काएको आ*रोप लागेका डा.भट्टराईले दलितलाई अ*पमान गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा वि*रोध सुरु भएको छ ।
उहाँले एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति वि*वादित बनेपछि वि*रोध सुरु भएको हो । डा. भट्टराईले दलितलाई अपमान गर्दै धर्म परिवर्तनकालागी भड्काएको भन्दै तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ । देशको उच्च पदमा आसिन व्यक्तिले यसरी सामाजिक सद्भाव भ*ड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिनु आफैंमा राम्रो संकेत होईन ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले भट्टराईलाई छा*डा छोड्नु नहुने समेत बताएका छन् । आजको अभिव्यक्तिले पनि भट्टराईले सामाजिक सद्भाव भ*ड्काएर राजनीति गर्न खोजेको आ*रोप छ । केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भने डा. भट्टराईलाई तत्काल प*क्राउ गरेर का*रबाही गर्न समेत माग गरेका छन् ।
त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार तथा नागरिक अभियन्ता देव प्रकाश त्रिपाठीले पनि का*रवाहीको माग गरेका छन् । एक कार्यक्रममा भट्टराईले दलितहरुलाई हिन्दु धर्मले अ*पमान गरेको भन्दै यो धर्म मान्न नहुने खालको अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो ।